သင့်အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သင့်အမြင်
Posted by MAUNG on Sep 1, 2011 in Copy/Paste | 20 comments
နိုင်ငံ ရပ်ခြားမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ၊ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံကြတဲ့ အခါ ဝမ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်ကြ၊ မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ကြ နဲ့ တစ်ကယ် ကိုကြည်နူးစရာပါ ။ အဲ… တစ်ချို့တစ်ချို့ သော သူတွေကတော့ တစ်မျိုးဗျ ။ မလိုအပ် ဘဲဘာကြောင့် ဘို လိုအရမ်းပြောချင်ကျမှန်းကိုမသိတာ ။ လိုအပ်လို့ Meeting Room ထဲမှာ၊ လူမျိုးခြား တွေ ရှေ့မှာ (ယဉ်ကျေးမှူအရ စသည်ဖြင့်) ၊ Public Transport ပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ် ထဲမှာ၊ အလုပ် သဘောအရ ပြောဆိုရတာ၊ ကျောင်းမှာ လိုအပ်လို့ ဒါမှမဟုတ် မွေးကထဲ ကရေခြား မြေခြား ရောက်နေပြီး ဗမာလိုမတတ် တာ လိုမျိုးဆို တာတွေ နားလည်နိုင်ပါတယ် ။ ခုန ကပြောသလို မလိုအပ်ဘဲ တစ်လွဲဆံပင်ကောင်းနေတာမျိုးတော့ ကျွန်တော့ စိတ်ထဲ မှာ တစ်မျိုးကြီးဗျာ ၊ ရိုးရိုး သားသား ပြောတာပါ။
သူငယ်ချင်း တို့ရော ဘယ်လိုထင်လဲ ။ ( လွတ်လပ် စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ် )
ကိုယ့်အမြင်လေး အရင်ရေးပေးမှ သင့်အမြင်လေးလည်း ပြောလို့ရမှာပေါ့။ ခုတော့ ဘာမှလည်းမပြောသေးပဲနဲ့
နိုင်ငံခြားမှာ ဗမာအချင်းချင်းတွေ့လို့ကတော့ အလွန်အတင်းပြောလို့ကောင်းတာပေါ့ …
ဘက်စ်ပေါ်မှာ ၊ ရထားပေါ်မှာ အတင်းပြောရတာ အလွန်အရသာရှိတယ် …
ဟုတ်တယ်မဝေရေ လူရှေ့ သူရှေ့ အတင်းပြောလို့ ကောင်းပါ့။ တခါတလေများဆို ရှေ့တင်ထားပြီး ပြောတာ။ ဗမာအချင်းချင်းတွေ့လို့ကတော့ ပြောရတာ အားရပါးရ စီးစီးပိုင်ပိုင်ကို ရှိနေတာပဲ။ :D
မှန်ပါတယ်။ကြည့်လို့ ကိုမရတာပါ။မြန်မာလိုပြောတော့ရော ပဲ့ပါသွားမှာကြနေတာဘဲ။သူများနားမလည်တော့ ပိုကောင်းပါသေးတယ်။
ဘယ်တိုင်းပြည်ရောက်ရောက်ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းတွေ့ရင် မြန်မာလိုပြောရတာ အရသာပါ။ လူမျိုးခြားပါရင်တောင် တောင်းပန်ပြီး မြန်မာလိုဘဲပြောပါတယ်။ ပြောလွန်းလို့ ခဏခဏ ရဲအဖမ်းခံရတာ… မှတ်မှတ်ရရ တနေ့ထဲ ၃ ခါ အဖမ်းခံရဘူးတယ်။ နောက်မှ ကျောင်းသားကဒ်ပြလို့ ဖင်ပူးတောင်းထောင်မတတ်တောင်းပန်တဲ့ ဂျပန်ရဲကို ရီလိုက်ရတာ.. အရသာကိုရှိနေတာဘဲ။
ဟုတ်ပဗျား၊ ဗမာလိုပြောရတာ အားအရဆုံးပါဘဲ (ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားဆိုတော့) ၊ အဲဒါတောင် တခါတလေ ဂျာအေးသူ့ အမေရိုက်သလိုဖြစ်နေတတ်သေးတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို (တခြားဘာသာစကား) ကတော့ လိုအပ်ရင်ပြော၊ ဒါမှမဟုတ် အလေ့အကျင့် အနေနဲ့ ပြောတာပဲကောင်းပါတယ်။
(သူများအထင်ကြီးအောင် ခွေးအကြီးလှည်းနင်းသလိုပြောနေတာကလွဲရင်) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ကြပါဗျား
မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်သူတွေလည်း ဒီလိုပဲ
ခုဟာက ကိုယ်ချင်းကိုယ်ချင်းကို နိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့ ချနေတာ
ကိုယ်တွေ့ ကိုယ်တွေ့ :D
ရေ = water ၊ တွင်း = hole
Comments တွေအားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ ။ ကျွန်တော့ အမြင်ကတော့ အဲလိုမျိုးကြုံရင် တစ်မျိုးကြီး ဘဲဗျာ ။လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး ။ အဲလိုမျိုး သူတွေ ကလဲ အပေါ်မှာ မန့်ထားသလိုဘဲ သူများအထင် ကြီးအောင် လှည်းနင်းခံ နေသလိုပါဘဲ ဗျာ
ဒါရိုက်တာ အောင်ကိုလတ် ရဲ့ 
သီချင်း လေး ဆိုပြ လိုက်ပေါ့
It’s because some burmese thought that if they can speak English well, they are better than the rest. Or some want to show off their English skills in the burmese community.
And some people told me that they have to speak in English at the office and they are used to speaking in English. Whenever they try to speak, English words come faster to mouth than Burmese words. But I don’t believe that reason.
And some burmese parents do not want their child to speak in Burmese. They want their child to behave as English people.
(၁) သူကြီးဖြစ်စမှာ တွေ့ကရာလူ ထိပ်တုံးခတ်ချင်သလိုပေါ့….သူတို့လဲ ဘိုလိုပြောတတ်စ ဆိုတော့
(၂) ဘိုလိုပြောတတ်လာတော့စိတ်ကြီးဝင်ပြီး ဘိုလိုပြောမှ လူရာဝင်တယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်…
အဲဒီလိုလူတွေက (inferiority complex) ရှိဖို့များပါတယ်…
ကျနော်ကတော့ မြန်မာအချင်းချင်း ဘိုလိုပြောရင် ဘယ်လိုမှ ပြောမထွက်ဘူး…အသုံးအနှုန်းတွေအကုန်မှားကုန်ရော…
အချင်းချင်း မြန်မာလိုပြောမှ အားရတယ်….
တခါက KL မှာ LRT စီးရင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ခလေး တွေက အရမ်းဆော့တာ..
အဲဒါနဲ့ဘေးကသူငယ်ချင်းက ဒီမျောက်တွေတော်တော်ဆော့တာဘဲ သူ့တို့အမေက ဘာမှမပြောဘူး ပါးစပ်ပိတ်ထိုင်နေတယ် တော်တော်အသုံးမကျတဲ့လူလို့ပြောတော့….အဲဒီ့မီန်းမကလဲ ခပ်တည်တည်ဘဲ..
(ကျနော်တို့က မလေးသူ ထင်နေတာ) ….သူတို့ဆင်းမဲ့ Station ရောက်ခါနီးတော့ အဲဒီ့မီန်းမကြီး သူ့ခလေးတွေကို ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ကျနော့်သူငယ်ချင်း လည်းမျက်နာဘယ်သွားထားရမှန်း မသိဖြစ်သွားတယ်…..သူပြောလိုက်တဲ့စကားက သားရေ ရှေ့ဘူတာကျရင်ဆင်းမယ်တဲ့……
မြန်မာ ၂ယောတ် ဘိုလိုတော့ တတ်တယ် ဒီ၂ယောက် မြန်မာ တောထဲမှာ ဘိုလိုချည်း မှုတ်နေရင် ဘေးက မြန်မာတွေ ဘယ်လိုထင် မလဲ ?? ဒီလိုပဲ ဒီ၂ယောက် ဘိုတိုင်းပြည် မှာ ဘိုတွေ ကြား မှာ မြန်မာ လိုချည်း ပဲ ပြော နေရင် ဘယ်လို နေ မလဲ ။ နားမလည် တဲ့သူ ကသူတို့ ၂ယောက် တို့ကိုနား မလည်စေ ချင်လို့ မသိစေချင်လို့ လို့ ထင်မှာပေါ့ ?? ဒါမျိုး လုပ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ စကားတွေ ကိုမပြော တတ်တာလဲ မဟုတ် ရင် ယဉ်ကျေးမှုအရ အားလုံး နားလည် တဲ့ စကား ပဲ ပြောသင့် ပါတယ် ။ နိုင်ငံခေါင်း ဆောင် diplomatic တွေကတော့ တမျိုးပေါ့ ။ ဘာသာပြန် ပေးမဲ့သူရှိတယ်လေ ။
Zoe@((ဒီလိုပဲ ဒီ၂ယောက် ဘိုတိုင်းပြည် မှာ ဘိုတွေ ကြား မှာ မြန်မာ လိုချည်း ပဲ ပြော နေရင် ဘယ်လို နေ မလဲ ။ နားမလည် တဲ့သူ ကသူတို့ ၂ယောက် တို့ကိုနား မလည်စေ ချင်လို့ မသိစေချင်လို့ လို့ ထင်မှာပေါ့ ?? ဒါမျိုး လုပ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်))
ဒါကတော့ ကာလ ဒေသအရပေါ့လေ.. သာမန်သူတို့ နှစ်ယောက်ထွေရာလေးပါး ပြောကြရင်တော့ မြန်မာလိုပြောသင့်ပါတယ်.. အများနဲ့ ရောပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်တော့ E လိုပြောပေါ့.. ဒါကကျွန်တော့်အမြင်ကိုပြောတာပါ
တစ်နေ့ ကျွန်တော့်ဆီကို ချင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တစ်ခုက ကွန်ပျူတာပြင်ဖို့ကောင်လေးတွေလွှတ်လိုက်တယ်.. ရောက်ရောက်ချင်း ကနေ သူတို့ ကိစ္စပြီးတဲ့အထိ ကျွန်တော့်ကို E လိုပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီအတိုင်း ပြန်ဖြေရတာပေါ့.. စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီကောင်လေးတွေငါ့ကိုဘာကြောင့် မြန်မာလိုမပြောတာလဲ.. ဘာအချိုးလည်းဟ လို့ တောင်ထင်လိုက်သေးတယ်.. အရင်တခြားလူကြီးပိုင်းတွေကနဲ့ ကတော့ မြန်မာလိုဘဲပြောဖြစ်တာပါ.. နောက်တော့မှ “ညီလေး မင်း ဘာကြောင့် ကိုယ့်ကို မြန်မာလို မပြောတာလဲ” လို့ အေးအေးဆေးဆေးမေးကြည့်တော့ သူတို့ တွေ နေခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာ(နေရာအားလုံးတော့မဟုတ်နိုင်ပါ) မြန်မာစကား မသုံးသလောက်ဘဲတဲ့.. သူတို့ ချင်း ဘာသာစကား နဲ့E လိုဘဲ အားလုံးနီးပါးသုံးကြလို့ ပါတဲ့… သူတို့ စကားကြောင့် ကိုယ့်မှာအတွေးပွားခဲ့ရတယ်..
ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်လျက်ကယ်နဲ့ ဘာကြောင့်သူတို့ ဒေသမှာ မြန်မာစကား မပြန့် ပွားရတာလဲ
သင်ပေးမယ့်သူ မရှိလို့ လား၊ အသုံးမဝင်လို့ လား၊ မသင်ယူချင်တာကြောင့်လား ဆိုတာတွေပါ
(သူတို့ နဲ့ တွေ့ ပြီးနောက်ထပ် အဲ့ဒါမျိုး တစ်ခါထပ်ကြုံရပြန်သေးတယ်)
Dear Ko Nyein Chan,
” သူတို့ တွေ နေခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာ မြန်မာစကား မသုံးသလောက်ဘဲတဲ့ ”
Simply because, ” မသင်ယူချင်တာကြောင့် ”
ကိုယ့်နိုင်ငံ = မြန်မာ နိုင်ငံ
သူတို့နိုင်ငံ = ချင်းနိုင်ငံ
( all တိုင်းရင်းသား) They hate Myanmar.
” မြန်မာ ” killed, tortured, raped, lied & bullied to them (တိုင်းရင်းသား).
အမေရိကန်နိုင်ငံသမိုင်းမှာလည်း ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ ရက်ဒ်အင်ဒီးယန်းတွေကို အင်အားသုံးပြီး ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားကို ပုံစံသွင်းတာ။ နောက်တခါ အလက်စကာပြည်နယ်ကို ရုရှားနိုင်ငံကနေ ၁၈ရာစု (ထင်တယ်) မှာ ဝယ်တော့ ဒေသခံ နေထိုင်သူတွေကို ရုရှားဘာသာစကားကနေ အင်္ဂလိပ်စကားကို သွပ်သွင်းပြောင်းလဲပစ်တာ။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ခလေးတွေကို မသင်မနေရ၊ ထောက်ပံ့ကြေး၊ အခမဲ့သင်တန်း စတာတွေနဲ့ ဗဟိုအစိုးရ အာဏာစက်ပြန့်အောင် လုပ်ကြတာ ဓမ္မတာပဲ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း အပေါ်မူတည်ပြီး ရက်စက်တာ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့တာ ကွာသွားတယ်။ အဓိက ထင်ရှားတာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဘာသာတူရင် ပြောင်းရတာ လွယ်ကူတယ်။ ချက်ခြင်းမရတောင် မျိုးဆက် တဆက်၊ နှစ်ဆက် စောင့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တောင်ပေါ်နေ တိုင်းရင်းသားတွေက အင်္ဂလိပ်တွေ ဆီကရလိုက်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို မူရင်းမိရိုးဖလာ ဘာသာလို့ မှတ်ယူကိုင်စွဲတယ်၊ ဗမာတွေကလည်း ဘာသာမတူတော့ ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။ ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲ။ ဗမာမကောင်းတာ မှန်ပေမဲ့ ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင်ဘဲ ဒါကိုပဲ တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မနိပ်ဘူး။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ အတွင်းက မပြောင်းလို့ အပြင်ကလာပြောင်းပေရင် ပိုပြင်းထန်တတ်တယ်…။ တင်းလာလို့ နဲနဲတမျိုး ပြောင်းပြောကြည့်တာ..။
@ KoNyeinChan ((သာမန်သူတို့ နှစ်ယောက်ထွေရာလေးပါး ပြောကြရင်တော့ မြန်မာလိုပြောသင့်ပါတယ်.)) ဒါဟုတ် ပါတယ် ။ တခြားလူရှိရင်လို့ပြောတာပါ ။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အလုပ် မှာမြန်မာ လဲရှိ ထိုင်ဝမ်လဲ ရှိတဲ့ အခါ မြန်မာ ၂ယောက် က တခြား လူရှိလည်း မြန်မာ လိုပဲပြောကြတော့ ။ နင် တို့ လူတွေ ကဘာ ဖြစ် လို့ ငါနားမ လည် တဲ့ စကားပဲ ပြောတာ လဲ ။ ငါ့ကို ပေးမသိ နိုင် ဘူး လား ၊ ငါ့မကောင်း ကြောင်း ကို ပြောနေတာ လားလို့ ထိုင်ဝမ် သူက မေးဘူးလို့ပါ ။ ဖြေရှင်းပေးရသေး တယ် ။ ဒါကလဲသူသူကိုယ်ကိုယ် ပဲလေ ၊ ကိုယ်သာသူ့နေရာမှာဆိုရင်လဲဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ ။ ကိုယ့်လူ ကြီး ပဲ ရှိလို့ က တော့ ဘာ စကားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ ။